नेपालमा बढ्यो निपाह भाइरसको जोखिम, कसरी बच्ने ? « Mero LifeStyle
नेपालमा बढ्यो निपाह भाइरसको जोखिम, कसरी बच्ने ?
मेरो लाइफस्टाइल	|| 13 September, 2021
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले निपाह भाइरसको सङ्क्रमणप्रति सचेत रहन आग्रह गरेको छ । मन्त्रालयले भारतमा यस प्रकारको भाइरसको सङ्क्रमण देखिएकाले नेपालमा पनि फैलिन सक्ने भएकोले सचेत रहन आग्रह गरेको हो । मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. कृष्णप्रसाद पौडेलले भारतसँग खुला सिमा भएकाले यहाँ पनि फैलिनसक्ने भएकाले सचेत रहन आग्रह गरिएको बताए । भारतको केरला राज्यमा केही दिनदेखि निपाह भाइरसको सङ्क्रमण देखिएको छ ।
निपाह भाइरसका लक्षण
– रिङ्गटा लाग्ने
– मांसपेशी दुख्ने
– श्वासप्रश्वासमा कठिनाइ हुने
– टन्सिलाइटिस देखिने गर्दछ । यो रोग बढी सङ्क्रामक पनि हुने गरेको छ ।
– निपाह भाइरसबाट बच्नका लागि फलफूल राम्रोसँग पखालेर मात्र खाने
– तरकारी सकेसम्म पकाएर खाने
– गाईबस्तुको गोठ र फार्म सफा राख्ने
– मासु काट्दा र पकाउँदा पञ्जा र मास्कको प्रयोग गर्ने
– सकेसम्म पानी उमालेर मात्र पिउने
– बेलाबेलामा साबुनपानीले हात धुने
– भीडभाडमा जाँदा मास्क लगाउने गर्नुपर्दछ ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. पौडेलका अनुसार उक्त भाइरसबाट ४५ देखि ७५ प्रतिशत मानिसमा मृत्यु हुने जोखिम रहेको छ । विश्वस्वास्थ्य सङ्गठन (डब्लुएचओ)ले निपाह भाइरसबाट सर्ने रोगलाई विश्वको १० प्राणघातक रोगमध्ये एक मानेको छ । २०१८ मा दक्षिण भारतीय राज्य केरलामा निपाह भाइरसका कारण १२ जनाको मृत्यु भएको थियो । नेपालमा पनि धमाधम चाडबाड नजिकिँदै छ । अब भारतबाट कामदार नेपाल फर्कनेको लर्को लाग्छ साथै, दसैंका लागि पशु पनि नेपाल भित्राइने हुनाले यसको जोखिम बढ्ने देखिन्छ । त्यसैले समयमै सचेत रहन आग्रह गरिएको डा. पौडेलले जानकारी दिए ।
यो भाइरसको सन् १९९९ मा सिंगापुर र मलेसियामा पहिचान भएको थियो । त्यसपछि सन् २०१८ मा भारतमा देखिएको थियो । डब्लुएचओका अनुसार यो भाइरसको अहिलेसम्म औषधि र खोपको विकास भएको छैन । यसको संक्रमणपछि बिरामीलाई आइसियूमा राखेर उपचार गर्नुपर्ने चिकित्सकहरु बताउँछन् ।